पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 02/06/2020)
वर्तमान संग coronavirus को प्रकोप disarray मा सबैको यात्रा योजनामा ​​फालिएको, यसलाई यदि तपाईं पर्छ जान्न गाह्रो हुन सक्छ coronavirus समयमा आफ्नो छुट्टी राख्न कि हैन. जबकि हामी तपाईंलाई यसलाई जारी राख्न चयन भने तपाईंको लागि भनेर निर्णय गर्न सक्दैन तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य रक्षा गर्न चरणहरू हुनुहुन्छ निश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण. अन्त गर्न, यहाँ छन्7मद्दत यात्रा सुझावहरू तपाईंलाई स्वस्थ गर्दा परिभ्रमण रहन.
साथै यात्रा गर्दा यो पिउने रक्सी गर्न सबैभन्दा उचित छ. यो राम्रो तरिकाले धेरै रक्सी पिउने एक कम प्रतिरक्षा प्रणाली सक्छ कि चिनिने (र केही दुष्ट hangovers). तपाईं प्राप्त बिरामी जोगिन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, निश्चित तपाईं न्यूनतम आफ्नो रक्सी खपत राख्न. जे भएपनि, जो एक सामान्य चिसो संग मोना लिसा भ्रमण गर्न चाहन्छ?
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “7 तरिकामा गर्न रहो स्वस्थ यात्रा गर्दा” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fstay-healthy-while-traveling%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)